Xog: Xasan oo dhaqaale culus ku amray shirkadaha (Waa imisa?) - Caasimada Online
Home Warar Xog: Xasan oo dhaqaale culus ku amray shirkadaha (Waa imisa?)
Xog: Xasan oo dhaqaale culus ku amray shirkadaha (Waa imisa?)
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Somalia Xassan Sheekh Maxamuud, ayaa milkiilayaasha Shirkadaha waaweyn ee ka howlgala magaalada Muqdisho ku amray inay bixiyaan dhaqaale.
Madaxweynaha ayaa Milkiilayaasha u sheegay in looga baahan yahay inay bixiyaan dhaqaale lasheegay inuu u qoondeeyay, waxa uuna sidoo kale hakiyay dhaqaale ay ku bixin lahaayen dhismaha dhowr wado oo muhiim ah.
Madaxweynuhu waxa uu Milkiilayaasha shirkadaha ku amray inay isku bixiyaan dhaqaalaha lagu dhisi lahaa wadooyinka iyo kuwa uu isaga sida gaarka ah uga dalbaday.
Xassan waxa uu Milkiilayaasha u sheegay in lacagta dhismaha wadooyinka uu isaga isticmaali doono, isla markaana uu lacagtaasi magi doono goortii uu soo laabto.
Wararku waxa ay sheegayaan in guud ahaan markii leysku daro lacagtaasi ay kor u dhaafeyso Shan milyan oo dollar, waxa ayna kor u dhaafayaan shirkadaha lagu amray lacagtaasi Todobo shirkadood oo ay ku jiraan kuwa Teleefanada.
Madaxweyne Xassan ayaa dhaqaalihii ay shirkadahaasi ku dhisi lahaayen wadooyinka u adeegsanaaya doorashadiisa, waxa ayna taasi qeyb ka tahay Musuq-maasuqa uu Xassan ku hayo dhaqaalaha dalka.
Maaha markii ugu horeysay oo uu Xassan Sheekh ku tagrifalo Hanti Qaran iyo mid gaar ahaaneyd.